[RASMI] xidhmo dr.fone - Android Data Eraser: Si buuxda u masixi Wax walba on Android iyo Ilaali Privacy
dr.fone xidhmo - Android Data Eraser
Si buuxda u masixi Wax walba on Android iyo Ilaali Privacy
Simple, habka guji-marayo.
Ha ogolaan in aad Android si buuxda iyo si joogto ah.
Masixi photos, xiriirada, fariimaha, abuse call iyo dhammaan xogta gaarka ah.
Taageerada dhammaan qalabka Android heli karo suuqa.
Isku day free Buy Hadda
tirtirka fudud ama keddibna warshad ma masixi xogta on Android si joogto ah. Xogta tirtiray weli la soo kabsaday karo technology heli karo. Android Data Eraser hubisaa in arimahaaga gaarka ah waa ammaan ah by joogto ah cadaymihii files tirtiray, nadiifinta Author taariikhda, kaydadkii iyo ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Iibinta ama Bixinta aad Phone Android?
Isticmaal Android Data Eraser si loo tirtiro xogta shakhsiga aad marka hore.
Si buuxda u masixi wax kasta oo aad telefoon Android.
Iibinta aad isticmaali phone Android ama kiniin ah? Isticmaal xidhmo dr.fone - Android Data Eraser si joogto ah masixi wax kasta on your Android iyo ilaaliyo arimahaaga gaarka ah.
Gabi ahaanba tirtiri phone Android nadiif ah.
keddibna xogta warshad Dhaqanka ma nadiifiso xogta shakhsiga aad telefoonka 100%. Android Data Eraser kaa caawinaysaa in aad ka tirtiri qalab Android nadiif ah iyo dib-u helin in goobaha warshad
Masixi cayn kasta oo xogta ku saabsan phone Android.
Android Data Eraser aad u saamaxaaya in ay masixi macluumaadka gaarka ah, sida sawiro, fariimaha, xiriirada, abuse call, qoraalada, jadwalka, iyo xogta app, iwm
Masixi jir phone Android oo aad naftaada ilaaliso.
Iyada oo qalabka saxda ah, tirtiray xogta on jir phone Android weli la soo kabsaday karo. Iyo 1 ka mid ah 10 waa dhibane tuugada aqoonsiga ee dunida. Ilaali macluumaadkaaga shakhsiyeed by tirtirto iyaga oo nadiif ah gebi ahaanba.
Taageer kun qalabka Android socda nidaamka Android kala duwan.
Asal ahaan xidhmo dr.fone - Android Data Eraser taageertaa dhammaan qalabka Android heli karo suuqa. Waxaa ku taageeri doonaa ka badan hal mar qalabka cusub ayaa laga heli karaa.
Masixi cayn kasta oo Data Personal on Your Android
Waxaad isticmaali kartaa Android Data Eraser si ay u tirtiri dhamaan macluumaadka gaarka ah, oo ay ku jiraan sawirro, fariimo iyo lifaaqyada, xiriirada, taariikhda call, qoraalada, jadwalka, xusuusinta iyo xogta app, iwm on your Android si joogto ah.
Waa maxay sababta Dooro xidhmo dr.fone
Simple, si dhakhso ah, oo wax ku ool ah.
data tirtirayaa aan la soo kabsaday karo by qalab kasta.
data No xajin ama xaday inta lagu guda jiro geeddi-socodka.
interface dareen qof kasta si ay u isticmaalaan.
Taageer All Android Qalabka
Android Data Eraser taageertaa dhammaan qalabka Android heli karo suuqa. No arrinta aad leedahay Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google Nexus, LG, ama ZTE, iwm iyo waxa Android version aad telefoonka waxaa socda, Android Data Eraser kaa caawinaysaa in aad masixi wax kasta taleefanka si joogto ah.
Sidee Android Data Eraser shaqeeyaan?
Android Data Eraser kaa caawinaysaa in aad ka abaalmarin xogta aad si buuxda u aqrin ka dibna nadiifinta disk oo dhan si buuxda. Markaas, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin in ay gacanta ku samayn keddibna warshad on afterword telefoonka. Iyadoo labadan hawlgallada, xogta aad ma noqon doonto in la mar kale soo kabsaday by qof awoodi.
Ma Android Data Eraser si buuxda u masixi dhammaan xogta ku saabsan telefoonka?
Haa, Android Data Eraser si buuxda iyo si joogto ah u nadiifi oo dhan xogta shakhsiga on telefoonka, oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha, photos, abuse call, jadwalka, app iyo xogta app, iwm
Maxaa habboon in aan bixiyo markii aan isticmaali Android Data Eraser dareenka?
Fadlan ha ka jari telefoonka ama la furo software kale maamulka Android kasta inta lagu jiro habka oo dhan. Iyo dhamaadka, raac edbinta on Android Data Eraser si ay u qabtaan keddibna warshad on your phone.
Waa maxay qalabka Android ma taageero Android Data Eraser?
Currently Android Data Eraser taageertaa dhammaan qalabka Android heli karo suuqa. Oo waxaa si deg deg ah ku taageeri doonaa qalabka Android more cusub marka la sii daayay.
" Wondershare xidhmo dr.fone for Android leeyahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface noqon kara navigation by users oo heer kasta ah ee khibradda. Waa miisaanka yar oo uusan isticmaalin lacagta badan ee khayraadka nidaamka. Guud ahaan, xirmada this qalab halkii waxtar leh oo aad ka soo heli kartaa xaaladda yar dhegdheg marka ay timaado soo kabashada xogta aallada Android aad. dheeraad ah ka baro >>
- From filehippo, a software download site top-kaalinta bixinta software top-kaalinta kaliya.
u shaqayso !!
dr.fone nadiifiyaa aan Samsung S5 si buuxda oo aan ku xirid ah. de haddaba ma waxaan u iibin karaan oo aan ka werwerayn oo ku saabsan macluumaadkayga.
shaqo gooood !!!
tirtire xogta Android habsami runtii shaqeeyay.
Markii hore waxaan ka walaacsan. Laakiin dr.fone soo baxday ka shaqeeya dhammaataan. Nice!
Top 7 Android Data Eraser Software si joogto ah masax Your Android Old
Top 6 Android Data masixi Apps difaaca Your Privacy
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Samsung Galaxy / Note
ka Phones Samsung Mobile kabsado Data
Sida loo Hagaaji Samsung Galaxy Geeri lama filaan ah: Screen Black of Death
2 Siyaabaha Ma Samsung Data Recovery Waxaad Tahay Inaad Ogaato
Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Samsung Phone Cell
Sida ugu wanaagsan ee ay u soo kabtaan Content tirtiray ka Phones Samsung
Android Data saaridda (Device Waxyeello)
data Samatabbixinta taleefanada Android jebiyey iyo kiniiniyada in 5 daqiiqo.
Ka saar shaashadda qufulan ka qalab Android oo aan laga badinin xogta.
Xulo gurmad xogta aad Android on computer iyo ku celin sidaad u baahan.